Bhora Valve Mabhora, China Valve Mabhora Fekitori, Valve Sphere - Ramangwana
Nhatu Nzira Bhora
Simbi Kune Simbi Bhora Chigaro
Yemberi Valve Bhora Co., Ltd., yakasimbiswa muna 2004, iri mutaundi rakakurumbira revhavha yeWenzhou, Zhejiang Province. Tine ruzivo rwakakura kwazvo mukugadzira nekubuditsa mhando yepamusoro MABHORO & zvigaro zvemavharuvhu ebhora.
Iko kushingirira uye hunyanzvi zvinoita kuti isu ive yakashongedzerwa uye inonyatso kutarisirwa kambani. Tine vashandi vanopfuura zana uye vakuru makumi maviri vevashandi vehunyanzvi. Nekuedza kwevatinoshanda navo, isu takave takazivikanwa kune ISO9001-2015 mhando sisitimu.
Iyi semusangano, inovhara nharaunda ye8000㎡, ine ingangoita zana seti emhando dzakasiyana dzeakakwira michina michina, kusanganisira CNC yakamira lathes, yakatwasuka michina nzvimbo uye nezvimwe, iyo murabhoritari ine maseti angangoita makumi mashanu ekuongorora mudziyo, kusanganisira matatu-eruzhinji kuyera muchina , inotakurika spectrum analyzer uye nezvimwe,
Tinogona kugadzira mabhora akagadziriswa zvinoenderana nemifananidzo yemutengi. Huru zvigadzirwa zvinosanganisira: trunnion bhora, inoyerera bhora, hunde bhora, T-mhando / L-mhando 3-nzira bhora nesimbi kune simbi bhora & chigaro chakatangira kubva 3/8 padiki kusvika 48 padiki (DN10 ~ DN1200) kubva 150LB kusvika 2500LB.
Yakagadzwa Muna 2004
Makore 16 Chiitiko
Zvakawanda Kupfuura 30 Zvigadzirwa
Kupfuura 15 Mamirioni
Simbi kusimbi bhora uye zvigaro zvemhete mhete
Ku Metal Bhora
Chigadzirwa Chigadzirwa: Trunnion Bhora Saizi: 4 "~ 48" Pressure Kuyera: Kirasi 150 ~ 2500 Basic Material: ASTM A105 (N), A350 LF2, A182 F304 (L), A182 F316 (L), A182 F6A / F51 / F53 / F55, A564 630 (17-4PH), Inconel625, Incoloy825, Inconel 718, Monel, Alloy nezvimwe, Kuputira: * Electroless nickel yakanamirwa pamifananidzo * Chrome Plating * Tungsten Carbide * Chrome Carbide * Stellite * Inconel yakafukidzwa nezvimwe, Roughness: Ra0. 2-Ra0.4 Kutenderera: 3/8 "-32": 0.015mm 32 "-48": 0.02mm Coaxiality: 3/8 "-32": 0.02mm 32 "-48": 0.03mm Kurongedza: bubble kuputira- carto ...
Kudzora V-chimiro Bhora
Chigadzirwa Chigadzirwa: Inodzora V-Shape Bhora Saizi: 2 "~ 12" Pressure Kuyera: Kirasi 150 ~ 300 Basic Material: ASTM A105 (N), A350 LF2, A182 F304 (L), A182 F316 (L), A182 F6A / F51 / F53 / F55, A564 630 (17-4PH), Inconel625, Incoloy825, Inconel 718, Monel, chiwanikwa etc., Coatings: * Electroless nickel yakanamirwa pamifananidzo * Chrome ra * Tungsten Carbide * Chrome Carbide * Stellite * Inconel yakafukidza etc. : Ra0.2-Ra0.4 Kutenderera: 3/8 "-32": 0.015mm 32 "-48": 0.02mm Coaxiality: 3/8 "-32": 0.02mm 32 "-48": 0.03mm Kurongedza: kuputira bubble ...
Trunnion bhora QC-T01
Chigadzirwa Chigadzirwa: Trunnion Bhora QC-T01 Kukura: NPS 6 "~ 40" （DN150 ～ 1000） Pressure Kuyera: Kirasi 150 ~ 2500 (PN16 ~ 420) Basic Material: ASTM A105 (N), A350 LF2, A182 F304 (L) , A182 F316 (L), A182 F6A, A182 F51, A182 F53, A564 630 (17-4PH), Monel, Alloy etc., Kupfeka : bubble kuputira- bhokisi-bhodhi- plywood kesi. Izvo zvigadzirwa zvinogona kuve zvinoenderana maererano nemufananidzo kubva kune vatengi
Simbi kuna Metal Ball ane ...
Simbi yakagara vharuvhu bhora uye chigaro ndiyo critica ...
Chigadzirwa Chigadzirwa: Seat mhete Saizi: 1/2 "~ 32" Pressure ...
Chigadzirwa Chigadzirwa: Chigaro chemhete Saizi: NPS3 / 4 ”~ 30 & ...
Welcome kutishanyira panguva dumba No. 5A26-1
Welcome to kutishanyira padumba No. 5A26-1 Tiri kuenda kunopinda vharuvhu pashoo muDusseldorf Germany kubva 27-29th Mbudzi. Welcome kutishanyira panguva dumba No. 5A26-1. Tiri kuenda kunoratidzira vharuvhu kuratidzira muDusseldorf Germany kubva 27-29th Mbudzi. Welcome kutishanyira panguva bhuti ...
Welcome shamwari kutishanyira!
Yemberi Valve Bhora Co, Ltd, yakagadzwa muna 2004, kambani iyi ine makore anopfuura gumi echiitiko chinoshamisa mukugadzira mhando yepamusoro MABHORO & ZVIGARO uye ZVIMWE ZVIMWE zvikamu zveBhora Mavharuvhu. Iko kushingirira uye hunyanzvi zvinogadzira yakashongedzerwa uye inonyatsotarisirwa kambani. Yakave yakasimbiswa ku ISO9 ...
Wuxing maindasitiri nzvimbo, oubei taundi, wenzhou, zhejiang dunhu, china.